स्वास्थ्य परिक्षणको उचित व्यवस्थापन नहुँदा बिरामी मर्कामा | E-Highway News
स्वास्थ्य परिक्षणको उचित व्यवस्थापन नहुँदा बिरामी मर्कामा
जिल्ला अस्पताल गौरमा स्वास्थ्य परिक्षणको उचित व्यवस्थापन नहुँदा बिरामी समस्या पर्ने गरेका छन् । अस्पतालमा उपचारका लागि आएका बिरामीहरुले सरल र सहज तरिकाले सेवा सुविधा नपाउने र उपचारका लागी आवश्यक सुविधा नहुँदा समस्या भएको हो । जिल्ला अस्पताल गौरले उपचारका लागि आएका बिरामीहरुलाई उपचारका लागि अन्यत्र पठाउने गरेको छ । गौर अस्पतालबाट उपचार सेवा प्रभावकारी रुपमा नपाएपछि बिरामीहरुले विरगंज, भरतपुर, काठमाण्डौं तथा भारतका विभिन्न स्थानमा रहेको अस्पतालमा जाने गरेका छन् । गौर अस्पतालमा आउने विरामीको समान्य उपचार गरेपछि अस्पतालले अन्यत्र लैजान सुझाव दिने गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत बर्ष जिल्ला अस्पताल गौरलाई २५ वेडबाट रुपान्तरण गर्दै ५० बेडको सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको थियो । तर ५० बेडको अस्पतालका लागि आवश्यक पुर्वधारसंगै स्वास्थ्य परिक्षणको समुचित व्यवस्थापन नहुँदा समस्या भएको छ । चिकित्सकको अभाव रहेकाले उपचारमा समस्या आएको जिल्ला अस्पताल गौरले जनाएको छ । उतm अस्पतालमा ४ जना मेडिकल अफिसर र डेन्टल सर्जन १ जनाको दरबन्दी गौर अस्पतालमा रहेको छ । तर उतm अस्पतालमा एक जना मात्र डा. कृष्ण साह विशेषज्ञ चिकित्सकका रूपमा कार्यरत रहनुभएको छ । गत महिना सम्म नेपाल सरकारबाट स्कलरसिप पाएर एमविविएस पढेकाहरु डा. रञ्जन सिंह र परबेज आलमको करार अवधीको म्याद सकिएको जिल्ला अस्पताल गौरले जनाएको छ । अस्पतालको ल्याब टेक्निसियनमा ३ जनाको दरबन्दी भए पनि एक जना मात्र कार्यरत रहेका छन । मन्त्रालयमा कर्मचारी अपुग भएको भनेर पत्राचार गरेको धेरै समय भईसक्यो तर कुनै सुनवाई नभएको डा.साहले बताउनुभयो । जसका कारण प्रभावकारी उपचारसेवा दिन नसकिएको उहाँको भनाई छ ।